ekhaya / Bible / YeVangeli kaLuka / ch 24 Luke
24:1 ke, ngeSabatha lokuqala, e ukukhanya yokuqala, baya engcwabeni, ethwele ubulawu ukuba alenzileyo.
24:3 Kwathi emva kokungena, abazange bafumane umzimba weNkosi uYesu.
24:4 Kwathi ukuba, ngelixa iingqiqo zabo nangoku bedidekile ngale, khangela, wema amadoda ezimbini ecaleni kwazo, eneengubo ezibengezelayo.
24:5 ke, kuba babesoyika kwaye kugqiba ubuso babo emhlabeni, aba babini wathi kubo: "Yini na ukuba ophilileyo nimfune kwabafileyo?
24:6 Akakho apha, kuba uvukile. Khumbula indlela awathetha ngayo kuwe, xa wayeselapho kwelaseGalili,
24:7 bathi: 'Kuba uNyana womntu umele kunikelwa ezandleni zabantu abanesono, ibethelwe, kwaye ngomhla wesithathu abuye avuke. ' "
24:8 Kwaye ke bakhumbula amazwi akhe.
24:9 Bebuyile engcwabeni, abo bazixela zonke ezo zinto kubafundi abalishumi elinanye, nakubo bonke abanye.
24:10 Ngoku ke bengooMariya waseMagadala, uNick, noMariya kaYakobi, kunye nabanye abafazi ababenabo, abazixelayo ezo zinto kubapostile.
24:11 Kodwa la mazwi abonakala ulahlekiso olusebenza. Kwaye ngoko ke abazange bakholwe kubo.
24:12 kodwa uPetros, nivuka, wabaleka, waya engcwabeni. Wakhothama, wabona ingubo yelinen lumiswe yedwa, waza wemka emangele ngokwakhe ngoko kwenzekileyo.
24:13 kwaye qaphelani, ezimbini baphuma, ngosuku olufanayo, ukuya e-Emawusi, apho umgama kwamaqonga mathandathu evela eYerusalem.
24:14 Bathetha omnye komnye ngazo zonke ezi zinto olwenzekileyo.
24:15 Kwathi ukuba, ngoxa sifunisela kwaye bebuzana phakathi kwabo, uYesu ngokwakhe, iyasondela, wahamba nabo.
24:16 Kodwa Bapheza ke amehlo abo, ukuze akwazi ukuba.
24:17 Wathi ke yena kubo, "Yintoni na la mazwi, leyo ngazo omnye komnye, nihamba nibe nithe matshamatsha?"
24:18 Ke kaloku omnye wabo, lo ugama linguKleyopa, baphendula bathi kuye, "Nguwe kuphela kutyelela eJerusalem ongazaziyo izinto ezenzeke khona kwezi ntsuku?"
24:19 Wathi ke yena kubo, "Ziziphi izinto?"Kwaye bathi, "Malunga uYesu waseNazarete, obeyindoda engumprofeti unguwo, enamandla ngemisebenzi kunye namazwi, phambi koThixo nabo bonke abantu.
24:20 Nendlela ababingeleli zethu eziphakamileyo kunye nabaphathi bamnikela ukuba agwetyelwe ukufa. Kwaye ambethelela.
24:21 Ke kaloku, thina besithembe ukuba wayeza kuba uMkhululi kaSirayeli. Kwaye ngoku, phezulu konke oku, namhla lusuku lwesithathu zenzekile ezo zinto ziye zenzeka.
24:22 ke, kakhulu, abafazi abathile phakathi kwethu ndikhwankqiswe kwethu. Ukuze emini phambi, babengavumelani engcwabeni,
24:23 yaye, ukuba anifumananga umzimba wakhe, babuyela, besithi ukuba babone nombono Angels, owathi ukuba uyaphila.
24:24 Kwaye abanye bethu waphuma waya engcwabeni. Kwaye bafumana kunjengoko babetshilo abafazi. kodwa ngokwenene, abazange bamfumane. "
24:25 Wathi ke yena kubo: "Hayi yobudenge, ndingabi entliziyweni wena, ukukholelwa yonke into elalithethwe yi Abaprofeti!
24:26 Ngaba uKristu akulindelekanga ukuba ukuhlupheka ezi zinto, ukuze angene eluzukweni lwakhe?"
24:27 Eqalela kwiincwadi zikaMosis nakubaProfeti bonke, wabachazela ukuba, kuzo zonke iZibhalo, izinto ngaye.
24:28 Basondela kuloo dolophu apho baye bemthiya. Waza waqhuba yena ukuze ukuya ku phambili.
24:29 Kodwa waphikelela naye, bathi, "Hlala nathi, kuba kuyahlwa kwaye ngoku ilanga iyehla. "Kwaye ngoko ke wangena nabo.
24:30 Kwathi ukuba, ngoxa esetafileni kunye nabo, wathatha isonka, kwaye wasikelela, waqhekeza, waza wazixolela kubo.
24:31 Avuleka ke amehlo abo, baza bamqonda. Kwaye yanyamalala emehlweni abo.
24:32 Bathi omnye komnye, "Ngaba Intliziyo yethu ibingavuthi na ngaphakathi kwethu, ngoxa uthetha ngendlela, Uthe ke akuyivula iZibhalo??"
24:33 Esukile ngelo lixa, babuyela eYerusalem. Balifumana ke abafundi abalishumi elinanye behlanganisene ndawonye, nabo kunye nabo,
24:34 bathi: "Inyaniso, kuye iNkosi ivukile, yaye Ibonakele kuSimon. "
24:35 Baza bachaza izinto zenziwa ngendlela, nokuba nokutyhileka kuye ekuqhekezeni isonka.
24:36 ke, ngoxa besazithetha ezi zinto, UYesu wema phakathi kwabo, Wathi ke yena kubo: "Uxolo malube nani. Kuyinto I. Sukoyika."
24:37 kodwa ngokwenene, ukuba babesiba buhlungu kakhulu, zidideke, beba babona umoya.
24:38 Wathi ke yena kubo: "Yini na ukuba nothuke?, yaye kutheni le iingcinga kuvuka kunyuke izicamango ezintliziyweni zenu?
24:39 Khangelani izandla zam neenyawo, ukuba ndim mna. Khangelani uthinte. Ngokuba umshologu awunanyama namathambo, njengokuba nindibona ndinawo mna. "
24:40 Ke kaloku, wathi le, wababonisa izandla neenyawo zakhe.
24:41 ke, ngoxa wayeselapho ukungakholwa wamangaliswa ngaphandle uvuyo, uthe, "Ingaba unayo nantoni na apha, ukuba badle?"
24:42 Babingelela ke intwana yentlanzi igcadiweyo, lobusi.
24:43 Akubon bedlile ezi emehlweni abo, othabatha into washiywa, kwakhe wabanika.
24:44 Wathi ke yena kubo: "Ngawo la amazwi endawathethayo kuni xa ndilapho, nangoku ke nawe, ngokuba zimelwe kukuzaliseka zonke izinto ezibhaliweyo ngam emthethweni kaMoses, nakubaProfeti, yaye kwiiNdumiso ngam. "
24:45 Waza wavula ingqondo zabo, ukuze baqonde iZibhalo.
24:46 Wathi ke yena kubo: "Kuba kubhaliwe, kwaye ngoko ke kuyimfuneko, ukuba uKristu eve ubunzima aze avuke kwabafileyo ngomhla wesithathu,
24:47 yaye, egameni lakhe, yokuguquka kunye noxolelo lwezono ukuba kushunyayelwe, phakathi kwazo zonke iintlanga, kuqalelwa eYerusalem.
24:48 Ke nina ningamangqina ezi zinto.
24:50 Then he led them out as far as Bethania. And lifting up his hands, wabasikelela.
24:51 Kwathi ukuba, while he was blessing them, he withdrew from them, and he was carried up into heaven.